चितवनमा बिरामी जाँचेर बसेका डाक्टरको पढाइ चेक गर्दा जम्मा ८ कक्षा पास ! – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : चितवनको राप्ती नगरपालिका–१२ स्थित यौरालीटारमा लोथर स्वास्थ्य चौकी छ। बिरामी त्यति नजाने भएकाले सुनसान प्रायः हुन्छ। तर, त्यही स्वास्थ्य चौकीबाट सय मिटर दूरीमा रहेको मेडिकलमा जँचाउन पालो पर्खिनुपर्छ। मेडिकलमा बिहीबार पनि एक जना व्यक्ति स्टेस्थोस्कोप लिएर बिरामी जाँचिरहेका थिए। उनी भनिरहेका थिए– ‘छाती हल्का खराब छ, यो एन्टिबायोटिक हो। यहाँसम्म पानी हालेर हल्लाएर खुवाउनु ठीक हुन्छ।’
Prevपाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, श्रावण ११ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextभोलिदेखि घरबाहिर निस्किन रोक लगाउँदै फेरी एकसाता निषेधाज्ञा !
नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले निकै सस्तो रेटमा कोभिड भएका बिरामीको उपचार गर्ने घोषणा, यस्तो छ ‘पोष्ट कोभिड प्याकेज’